I-Semalt: Izicelo zoLwazi oluDluliweyo oluDlulileyo oluSebenzisiweyo
Imfuno yokukhangela i-intanethi iyanda imihla ngemihla ngenxa yokuba ezininzi iinkampani zisebenzisa ubuninzi beenkcukacha ngeenjongo ezahlukeneyo. Imibutho eyahlukeneyo kunye nabantu ngabanye baneemfuno ezahlukahlukeneyo zokucoca ngewebhu iimfuno. Enyanisweni, okwangoku, kukho iintlobo ezingapheliyo zokukhutshwa kwedatha. Ukubonisa ukubaluleka kokuqokelela ulwazi, iifowuni eziqhelekileyo ezisetyenzisiweyo zedatha zichazwe apha ngezantsi - importance of grain drying.
1. Iqoqo leenkcukacha ezivela kwiifayile ze-PDF
Esi sicelo (scraping data) sokufunwa kwedatha ukuqokelela idatha ethile kwiifayile zePPP nokuguqula ukugqwesa iifayile. Iifayile zeenkcukacha ezijoliswe kuyo nganye zinamaxwebhu angama-15 ukuya kuma-20 eenkcukacha malunga namaphepha ama-5 ukuya kwe-15.
2. Ukukhipha ulwazi ngeenjini zokukhangela kunye neenkcukacha ze-intanethi
Le yidinga yokufunwa kwedatha eqhelekileyo. Kudinga ukuqokelela idatha kwiijini zokukhangela kunye neekhomputha ze-intanethi kwaye zifake kwi-database ecacisiweyo.
3. Isicelo se-Imeyli yokudibanisa kunye nokuqinisekiswa
Esi sicelo sokukhutshwa kwedatha sidinga idilesi ye-imeyile, igama lenkampani, inombolo yefowuni, urhulumente kunye nesixeko apho le nkampani ikhona khona. Olu hlobo lwazi ludingeka ngokubanzi kwiinjongo zokuthengisa. Ulwazi kufuneka luqinisekiswe kwaye luququzelelwe ukulungiswa kokusetyenziswa. Uluhlu olupheleleyo lweenkampani lunokukhwabaniswa lula kwiinkcukacha, kodwa ulwazi oluninzi lunokufumaneka kwiwebhusayithi esemthethweni yenkampani nganye.
4. Ukuqokelela uluhlu lwe-imeyile
Lo msebenzi ngowokuqokelela iidilesi ze-imeyile zabantu abaneziteshi ze-YouTube. Ingasetyenziselwa ukusebenzisana nabo okanye ukuthengisa iimveliso / iinkonzo ezithile kubo. Kungasetyenziselwa ukuqhuba uphando olubalulekileyo.
5. Uluhlu lwazo zonke ipropati eziqeshwe kwindawo ethile
Le isicelo sokukhutshwa kwewebhu sisetyenziselwa ukufumana uluhlu lwezindlu eziqeshwe kwiwebhusayithi ethile. Nangona i-website ejoliswe kuyo iluhlu lwezindlu eziqeshwe kwiindawo ezininzi, kuphela ezo ndawo zifunekayo kule sicelo. Ukususela malunga ne-1400 ukuya ku-1650 ipropati zokuqeshisa zifakwe kwiwebhsayithi, ezifunekayo kufuneka zifakwe kwaye zikhishwe. Kwinkampani nganye yokuqeshisa, iinkcukacha ezifunekayo ziyimpawu zepropati, igama, kunye neenkcukacha zabaqashi. Yonke idatha ekhishweyo kufuneka ithunyelwe kwi-spreadsheet exelisiweyo njengoko ichaziwe ngumceli.
6. Iinkcukacha zoqhagamshelwano ngabaprofesa bezezimali eUnited States
Esi sicelo sokukhutshwa kwedatha kukufuna uphando kwiiwebhusayithi zonke iiyunivesithi eUnited States ukuthabatha iidilesi ze-imeyili kunye neenombolo zefowuni zabaprofesa bezemali.
7. I-Database ye-UK abathengisi bemoto
Lo msebenzi we-web scraping ngowokuhlanganiswa kwabathengisi bemoto base-UK abazodwa kwii-Audi naseNissan brand. Kulowo nalowo wabathengisi, iinkcukacha ezifunekayo yile nombolo yefowuni, idilesi ye-imeyile, idilesi yeposi, igama lebhizinisi, kunye negama lomphathi.
Ekugqibeleni, kukho ikhulu leemfuno ze-web scraping. Ezi zikhankanywe ngasentla zikhethwe ngokukhethiweyo ngenjongo yomzekeliso.